NoFap လမ်းညွှန် - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
NoFap မှပြည့်စုံသော Beginner ၏လမ်းညွှန်
Thread သို့လင့်ခ် - [မူကြမ်း] NoFap မှပြည့်စုံသော Beginner ၏လမ်းညွှန်
NoFap ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှအသစ်ရောက်ရှိလာသူများစွာသည်ကဏ္ new အသစ်တွင်မေးခွန်းများတင်ကြသည်ကိုတွေ့ရပြီး၊ အကြိမ်ပေါင်းရာနှင့်ချီ။ ဖြေကြားနိုင်သောမေးခွန်းများစွာ။ ကျွန်ုပ်သည် ၁) အသင်းဝင်များ၏အားထုတ်မှုကိုသူတို့အများဆုံးသက်ရောက်မှုရှိသည့်နေရာတွင်ကူညီရန်နှင့် ၂) လူတိုင်းအားဤအပိုင်း၏အသိပညာသိရှိစေရန်ဖော်ထုတ်ရန်ကူညီခဲ့သည်။
(အများစုမှာသဘောတူကြသည့်အကန့်အသတ်များသာမဟုတ်ဘဲ) NoFap ၏အဘယ်၊ အဘယ်ကြောင့်နှင့်မည်သို့အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ကိုလူအများအပြားကဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ လူအများကွဲပြားခြားနားသောအတွေးအခေါ်များကိုဖုံးလွှမ်းရန်ရေးသားထားသည်။ ဤအချက်အလက်အချို့ကိုဘေးဘားတွင်ဖော်ပြထားသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ဤအရာသည်ပိုမိုပြည့်စုံကောင်းမွန်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ရည်ရွယ်ချက်မှာ၎င်းသည်ရပ်ရွာမှထုတ်လုပ်ပြီးအမြဲတမ်းဖြစ်ပေါ်နေသောစာရွက်စာတမ်းဖြစ်ရန် - ကျွန်ုပ်သည်လူများအကြံပြုလိုသောအကြံပြုချက်များ - သင်ထည့်ချင်၊ ပြုပြင်လိုသည့်သို့မဟုတ်ဖယ်ထုတ်လိုသည့်အရာများကိုမှတ်ချက်ပေးလိုသည်။
အခုငါဒီအပိုင်းကိုအပိုင်းသုံးပိုင်းခွဲလိုက်တယ်၊ ဒါကြီးလာတာနဲ့အမျှထပ်ခွဲခွဲတွေလိုအပ်လာလိမ့်မယ်။ ယခုအချိန်အထိ၎င်းသည်ဘာလဲ၊ ဘာကြောင့်လဲ၊ ငါနောက်ထပ်ပုဒ်မနှစ်ခုကိုလည်းထည့်သွင်းရန်လိုသည် -“ အရင်းအမြစ်များ” နှင့်“ သင်မျှော်လင့်ထားနိုင်သည့်အရာ”၊ သို့သော်ယင်းတို့အတွက်ပစ္စည်းများကိုထောက်ပံ့ရန်အခြားသူများအားငါထားခဲ့မည်။ “ သင်မျှော်လင့်ထားနိုင်သည့်အရာ” အပိုင်းတွင်မည်သည့်အကျိုးကျေးဇူးများပေါ်ပေါက်လာသည်နှင့်ယင်းတို့၏ယေဘုယျအတွေ့အကြုံ၌သူတို့အကျိုးခံစားရသောအခါမည်သို့ဖော်ပြမည်ကိုဖော်ပြလိုပါသည် (လူတိုင်းအတွက်ကွဲပြားသော်လည်းအချို့ပုံစံများရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်) ။
NoFap အချိန်မဆိုကာလအဘို့အညစ်ညမ်းသို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေတစ်ခုခုကိုရှောင်နှင့် ပတ်သက်. အခြေခံကျကျပါပဲ။ သငျသညျသိလျက်သုံးကြောင်းမဆိုအတု (ငါ့အဘို့ကူးယဉျအပါအဝင်, ဒါပေမယ့်သင်တို့ကိုမှတက်မယ့်) မီဒီယာလိင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှုံ့ဆော်သကဲ့သို့ငါ porn သတ်မှတ်မယ်လို့; နှင့်သင့်မိတ်ဖက် (sexting စသည်တို့နှင့်အတူလိင်ပြင်ပတွင်မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွအဖြစ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ-ငါပြဿနာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကြောင့်နှင့်အတူတစ်လှည်နှောင့်အယှက်မဟုတ်ဘူးလျက်ရှိ၏ထို့ပြင်အချို့သောလူတွေကအချိန်အချို့ကိုကာလအဘို့အဖြစ်ကောင်းစွာလိင်ကိုရှောင်ရှားရန်ရှိသည်ပြဿနာများကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်အတွက် PIED ကဲ့သို့သော; နှင့်အခြားသူများရိုးရှင်းစွာ) အိမ်မထောင်ဘဲနေခြင်းအတွက်ယုံကြည်ပါတယ်။
ဒီရဝုဏ်အပြင်, Userbase အတွက်သိသာထင်ရှားသောအပြောင်းအလဲရှိပါတယ်။ အချို့ကမူအပြာနှင့် / သို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်သင်စွဲလမ်းသည့်အခါ၌သာပြ(နာများဖြစ်သည် (ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်သင်၏ဘ ၀ အပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော်လည်း၎င်းကိုသင်အတင်းအကျပ်ပြုကျင့်သောအခါ)၊ အချို့ကမူဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ညစ်ညမ်းမှုသည်မကောင်းကြောင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်အတော်အသင့်ကောင်းမွန်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ အခြားသူများကမူညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်မည်သည့်ပမာဏနှင့်မျှမတူပါ။ သင်တို့သည်ကိုယ်အဘို့အလိုငှါစစ်။ မကုန်နိုင်ကြ။ အထူးသဖြင့်ဒီအလေ့အထနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့သိဖို့ခဲယဉ်းတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောမယ်၊ အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်တို့အများစုအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဟာအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်ကိုနားလည်ဖို့စိတ်ရှုပ်နေတယ်၊ ၎င်းသည်စွန့်စားရမှုနည်းပါးပြီးအနည်းဆုံးအလားအလာ (များစွာသောအားဖြင့်သက်သေပြသကဲ့သို့) မြင့်မားသောဆုလာဘ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်၎င်းအားမျှတသောရိုက်ချက်ပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ငြင်းခုံမှုများသည်အယုံအကြည်မရှိပါ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေမျှတသောရိုက်ချက်သည်မည်သည့်အရာဖြစ်သည်ကိုသင်ဆုံးဖြတ်ရန်မှာသင်သာဖြစ်သည်။
ငါဒီမှာကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသိုင်းအဝိုင်းအဘို့အပြောနိုင်လျှင်, ငါတို့ယုံကြည်ချက်တရားသေအယူဝါဒသို့မဟုတ် prudishness (လိင် - negativism) မှလာကြကြောင်းဤနေရာတွင်ရှင်းလင်းချင်ပါတယ်။ သူတို့ကိုတိုက်ရိုက်အတွေ့အကြုံမှတစ်ဆင့်၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်အတည်ပြုရန်မဖြစ်နိုင်သည့်မည်သည့်အရာကိုမဆိုယုံကြည်ရန်မည်သူ့ကိုမျှမတောင်းဆိုပါ။ ဒီခွဲ၏ဆောင်ပုဒ် "ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကြည့်ရှု" နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့အများစုအတွက်မူကျွန်ုပ်တို့ဤသို့ပြုရသည့်တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းပြချက်မှာ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ တစ်ခုလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အချို့့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းရလဒ်များကိုကြည့်ရှုသော်လည်းအလားအလာအကျိုးကျေးဇူးများကိုအများတို့သည်လည်းအချိန် (၏တစ်ခါတစ်ရံအများကြီး) လုံးဝပုဂ္ဂလဒိဋ္ဖြစ်ကြပြီးအတူပါလာ။ ဒါဟာလူတိုင်းအတွက်ကွဲပြားခြားနားသည်။ သို့သော်ဤအကြောင်းကြောင့်, အဲဒါကိုယုံကြည်ခြင်း၏တစ်ခုန်ယူရန်သင့်အားလိုအပ်နိုင်ပါသည်ကြောင့်ကာလတိုအတွင်းခက်ခဲပါလိမ့်မယ်သော်လည်းရှောင်နှင့်အတူဆက်လက်။ ငါမတိုင်မီပြောခဲ့သကဲ့သို့, တကအလွန်နိမ့်အန္တရာယ်နဲ့အလားအလာမြင့်မားတဲ့ဆုလာဘ်အရာဖြစ်ပြီး, အများအပြားကသူတို့ဘဝတွေကိုပြောင်းလဲပစ်ခဲ့သည်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။
ဤသည်အဓိကမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်: P / M / O မဆိုသင်အမှန်တကယ်ပျော်ရွှင်စေပါသလား ဤအရာသည်သင်အချိန်များစွာသုံးရန်စဉ်းစားရမည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘဝမှာအပျက်သဘောဆောင်တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိတဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာကောင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရပြီ။ ငါရင့်ကျက်၏စိတ်ကူးသာ။ ကြီးမြတ်ရေရှည်ပြည့်စုံ၏ကုန်ကျစရိတ်မှာချက်ချင်းဆန္ဒပြည့်ဘို့သွေးဆောင်မှုကိုကျော်လွှားရန်သင်ယူခြင်းမှဆင်းလျှော့ချလို့ပြောချင်ပါတယ်။
အခုဆိုရင်ငါတို့ရှိသမျှသည် porn နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၏အပြုသဘောဆောင်သောရှုထောင့်များကိုသိပြီးသူတို့အားလုံးရှိသည့်အခြေခံသဘောသဘာဝကိုဆွဲဆောင်သောကြောင့်၎င်းတို့ကိုအလွယ်တကူနားလည်နိုင်သည်။ သို့သော်အဘယ်သို့ဆိုးကျိုးများကော? ၎င်းတို့သည်ပိုမိုသိမ်မွေ့ပြီးအမှန်တကယ်နားလည်ရန်အတွေ့အကြုံနှင့်ကျယ်ပြန့်သောရှုထောင့်လိုအပ်သည်။ သင်သည်၎င်းကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံမှသင်ယူရန်လိုလိမ့်မည်။ သို့သော်အောက်ပါအတိုင်းပြyouနာ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုနားလည်ရန်သင့်အားကူညီနိုင်သည့်အယူအဆရေးရာမူဘောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မည်သည့်အငြင်းပွားမှုများသည်သင့်အားအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်ကိုကြည့်ပါ။ သင် nofap ကိုဆက်လုပ်ရန်ရွေးချယ်ပါကဤအငြင်းပွားမှုများကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုပြီး၎င်းတို့အပေါ်သင်၏ရှုထောင့်ပြောင်းလဲမှုရှိမရှိကြည့်ပါ။ သင်နှိုင်းယှဉ်နိုင်ရန်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်များ၌သင်၏အတွေးများကိုတစ်ခုချင်းစီပေါ်တွင်ရေးသားခြင်းသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းနိုင်သည်။
ဒါကြောင့်ညစ်ညမ်း၏ဆိုးကျိုးဘာတွေလုပ်နေလဲ? ဤအငြင်းခုံအများအပြားအခြေခံအခြေခံရဝုဏ်သင်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုဖြစ်လာသောရိုးရှင်းတဲ့အချက်ဖြစ်ပါသည်။ သင်လိုချင်သင်သည်အဘယ်သို့သောသူအသွင်သဏ္ဌာန်, သင်၏ရှုထောင့်နှင့်သင်မည်သို့ခံစားရသည်ကိုပြုအမှုအရာ, အခြားသောလမ်းထားပါ။
သင် porn ကိုကြည့်သည့်အခါသင်နှစ်သက်သောအလိုဆန္ဒများကိုသင်အားဖြည့်ပေးသည်။ ဒီအတွက်ကြောင့်၊ porn ကိုကြည့်ခြင်းကသင့်အား porn ကိုပိုမိုတောင့်တင်းစေသည်။ ရိုးရှင်းသောအငြင်းပွားမှုမှာသင်၏ဘ ၀ တွင်၎င်းကိုမလိုအပ်ပါကအဘယ်ကြောင့်ယင်းဆန္ဒကိုဖန်တီးရမည်နည်း။ ဒါဟာများစွာသောအချိန်ဖြုန်းတီးဘို့ဖြစ်ပါတယ်။ အယူအဆမှာ၊ သင်၏အချိန်နှင့်ခွန်အားကိုမွေ့လျော်သော၊ ခဏတာအပျော်အပါးများထက်သင်၏ဘ ၀ ကို 'ကြီးထွားစေ' သောအရာများပေါ်တွင်သုံးစွဲခြင်းကပိုကောင်းသည်။ ဤပေါ်ပေါက်လာသောမေးခွန်းတစ်ခုသည်ညစ်ညမ်းမှုသည်သင်၏တွန်းအားမှယာယီအားဖြည့်ခြင်း မှလွဲ၍ သင်၏ဘ ၀ ၌ဘာတစ်ခုမှထပ်ပေါင်းထည့်ခြင်းရှိ၊ နှစ်ပေါင်းများစွာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်နှင့်တူညီသောအယူအဆနီးပါးမရှိကြောင်း၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ဘဝကိုဘာမှမထည့်သွင်းပေးကြောင်းကျွန်ုပ်ထင်မထားပါ။ ညစ်ညမ်းတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုပြီးသွားတဲ့အခါမင်းရဲ့ခံစားချက်က 'ငါဘာကြောင့်ကြည့်နေတာလဲ' ဆိုတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကနေစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်အဖြစ်သို့ချက်ချင်းမပြောင်းပါနဲ့။ ? ဤသည်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ခဏတာပျော်ရွှင်မှုကိုအလေ့အထကိုယ်နှိုက်ကဖန်တီးပြီးတည်တံ့ခိုင်မြဲသည်ဟုကျွန်ုပ်အားအကြံပြုသည်။
ဒီစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုအတိုင်းလိုက်နာခြင်း၊ ညစ်ညမ်းခြင်း၊ အချို့သောအလိုဆန္ဒများကိုအားဖြည့်ခြင်းအားဖြင့်သင်ဟာသင်မလိုချင်သောအရာများ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြားရှုထောင့်များ၏ကုန်ကျစရိတ်မှာထိုသို့ပြု။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ porn ၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုသည်အသစ်အဆန်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်မတူညီသောအမြိုးသမီးမြားနှငျ့မတူညီသောအပြုအမူဗီဒီယိုအသစ်များကိုအဘယ်ကြောင့်ဆက်လက်ရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်ကိုစဉ်းစားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီအသစ်အဆန်းကိုရှာဖွေခြင်းကမင်းကိုစိတ်မ ၀ င်စားစေနိုင်တဲ့အရာတွေကိုကြည့်ရှုစေပြီး၊ နောက်ပိုင်းမှာသင့်ရဲ့ 'လိင်မှု' ထဲကို 'ကြိုး' ဖြစ်လာတယ်။ လူအများစုကသူတို့ကအကြမ်းဖက်မှု၊ လိင်တူချစ်သူတွေနဲ့ကလေးသူငယ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွဲမက်လာပြီးသူတို့ဘဝကိုကြီးမားစွာထိခိုက်စေသည်။ နှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုရှောင်ကြဉ်ပြီးနောက်များစွာသောသူတို့သည်ဤဝတ်စုံဝတ်များသည်သိသိသာသာစွမ်းအားဆုံးရှုံးသွားသည်သို့မဟုတ်လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ ဤဖြစ်စဉ်၏နောက်ထပ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာ porn သည်ရင်းနှီးမှုမပေးနိုင်။ အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏လိင် - အရာဝတ္ထုဆိုင်ရာကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း မှလွဲ၍ မည်သည့်အရာကိုမဆိုတန်ဖိုးထားရန်လှုံ့ဆော်မပေးသောကြောင့်၎င်းသည်သင်၏အမြင်ကိုအပေါ်ယံ၊ ဝတ္ထုများကိုပိုမိုတန်ဖိုးထားရန်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာအခြားဆန္ဒများကိုမဖြည့်ဆည်းပေးသောကြောင့်လိင်နှင့်အမျိုးသမီးများကိုပိုမိုမျှတသောတန်ဖိုးထားလေးစားမှုစွမ်းရည်ကိုတဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းသွားစေပါသည်။ ထို့ကြောင့်လိင်သည်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုလျော့နည်းလာပြီးနောက်ဆုံးတွင်ယောက်ျားများသည်၎င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းထက်လိင်မှုကိစ္စကိုညစ်ညမ်းစေနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ခြင်းသည်သင်၏ဘဝတွင်သင်၏လူ့အသိုင်းအ ၀ ိုင်းအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဤသင်တန်းသည်အမျိုးသမီးကိုယ်ခန္ဓာ၏လှုံ့ဆော်မှုနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများအကြားခိုင်မာသောဆက်စပ်မှုကိုဖန်တီးပေးသည်။ ဒါပေမယ့်သော့ချက်ကတော့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများမှာပိုးပန်းခြင်း၊ စကားစမြည်ပြောခြင်း (သို့) လိင်ကို ဦး တည်စေသောအရာများမရှိခြင်း၊ ပြီးတော့လိင်တစ်မျိုးတည်း၊ ဘာမှမရှိဘူး။ ကွန်ပြူတာနဲ့လိင်ပဲဖွင့်လိုက်ရုံပဲ။ ဒါကြောင့်သင်ကမိန်းမတွေဆီကနေလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုသာလိုချင်တာ၊ မျှော်လင့်တာကိုခံရပြီးသူတို့နဲ့ပါတ်သက်တဲ့အခြားအရာတွေကိုတန်ဖိုးထားချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒပျောက်သွားတယ်။ ဒါကြောင့်သင်အမှန်တကယ်ဘဝ၌အမျိုးသမီးများနှင့်အတူရှိနေသောအခါသင့် ဦး နှောက်သည်လိင်ကိစ္စကိုမျှော်လင့်နေသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ဖြစ်မလာသောကြောင့်သင်စိတ်ပျက်သွားသည်။ ပြီးတော့သင်ဟာလိင်ကိုလိုချင်တာ / မျှော်လင့်ဖို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကြိုးတပ်ထားတာဖြစ်လို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လိင်ဆက်ဆံခြင်းရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဟန်ဆောင်တာကလွဲလို့ဘာမှမရှိဘူး။ ၎င်းသည်စိတ်ပျက်စရာများ၊ မကျေနပ်မှုများဖြစ်ပေါ်စေသည့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောတက်ကြွလှုပ်ရှားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဒါက porn နဲ့ masturbation နှစ်ခုလုံးအတွက်ပါအကျုံးဝင်သည်။ ပုံမှန်မဟုတ်သောဇီဝကမ္မဆိုင်ရာအခြေအနေများ (ဥပမာဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြBarနာများ) ကိုတားမြစ်ခြင်းအားဖြင့်လူသားများသည်အခြေအနေနှင့်မသက်ဆိုင်သောငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှု၏သဘာဝရှုထောင့်ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ထိုသို့ဖြင့်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှု၏ကျွန်ုပ်တို့၏သဘာဝရှုထောင့်ကိုဖုံးကွယ်ထားသည်။ ၎င်းသည်ထူးဆန်းသည်၊ သို့သော်သူတို့၏ဆန္ဒများအားလုံးနီးပါးကိုပုံမှန်ဖြည့်ဆည်းပေးသောငါသိသောလူများသည်လုံးဝစိတ်ဆင်းရဲရသည်။ နောက်ထပ်တွေ့ရှိချက်တစ်ခုမှာ Geoff Thompson မှဖြစ်သည် အမှောင်မှတစ်ဦးက Beginner ရဲ့လမ်းညွှန် (အကြွေး: / u / squalldawa): Porn၊ အထူးသဖြင့်ယောက်ျားများသည်ပုံမှန်ဆေးစွဲလေ့ရှိသည်။ Porn သည်အာရုံများကိုကျွေးမွေးသောအရာများစွာထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အာရုံများသည်အတ္တကိုတမ်းတစေသည်။ အတ္တသည်ငါဖြစ်၏၊ I am ကိုဖွံ့ဖြိုးလိုပါကသင် porn နှင့်အခြားအာရုံခံလွန်ကဲမှုများကိုခုခံရန်လိုအပ်သည်။ porn မမှားသည်မဟုတ်။ ၎င်းသည်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာပြissueနာမဟုတ်ပါ။ ဒါဟာကိုယ့်အတ္တလမ်းလျှောက်ရုံ I am fetal state မှာစောင့်ရှောက်တဲ့စွဲလမ်းသည်။ သင်ဤအမျိုးအစားရသည်အထိသင်မည်မျှပင်တွေးတောပါစေ၊ ငါအားကြီးသောသူတစ် ဦး ဖြစ်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ထိုအရာကိုအာရုံခံစားမှုလွန်ကဲစွာငတ်မွတ်စေခြင်းအားဖြင့်အတ္တကိုအားနည်းသွားစေနိုင်သော်လည်းတစ်ချိန်တည်းတွင်ကိုယ့်ကိုယ်ကို (I Am) ကိုတွေးတောဆင်ခြင်ခြင်း၊
ဤဆင်ခြေသာတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဖို့သက်ဆိုင်သည်သင်တို့အားကိုယ်အဘို့ကိုအတည်ပြုရန်ရန်ရှိသည်လိမ့်မည်ဟုတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ retention ကို Semen မှအစွမ်းထက်အကျိုးကျေးဇူးများကိုရှိပါတယ်, ဒီမှာအတော်များများကယုံကြည်, ငါသူတို့ထဲကတဦးတည်းဖြစ်၏။ ဤအကြိုးကြေးဇူးမြား (သက်သက်သာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ကွန်ကရစ်စည်းကမ်းချက်များ၌စသည်တို့ကိုသတ္တုဓာတ်, ဗီတာမင်, ဟော်မုန်း, ရှင်းပြခဲ့နိုင်ပါတယ်ရှိမရှိ - ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားစဉ်မြေးဆက်၏ရှင်သန်မှုကိုသေချာစေရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရှင်သန်မှုတစ်ခုစူးရှအန္တရာယ်လောကအတွက်မရှိဘဲတတ်နိုင်သမျှပေးဖို့ပြောင်းလဲပြီဒီ may အကူအညီသုတ်ရည်လွှတ်နိုင်အောင်ပင်ပန်းတယ်သည်အဘယ်ကြောင့်ရှင်းပြဖို့), သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို esoteric ဝေါဟာရများ (chi, ဒါမှမဟုတ်ဘဝအင်အားသုံး) တွင်, ဒါမှမဟုတ်တချို့ပေါင်းစပ်အတွက်ငါသုတ်ရည် retention ကိုကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာငါ့အသက်ကိုသိသိသာသာတိုးတက်ကောင်းမွန်ကြောင်းမျက်မြင်လက်တွေ့ကကြိုးစားနေ၏နှစ်ပေါင်းများစွာပြီးနောက်တွေ့ပြီ။ ငါကစဉ်းစားလမ်းကိုစွမ်းအင်၏စည်းကမ်းချက်များ၌တည်ရှိ၏။ ဒီစွမ်းအင်ကိုသိမ်းဆည်းနေငါ့ကိုငါ့အသက်ကိုပေါက်သောအမှုအရာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အားဖြင့်ပိုကောင်းအသုံးပြုနိုင်စွမ်းကိုပေးသည်။ ဒါဟာအစ equilibrium မှာငါ့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ကြားခံတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာကိုထောက်ပံ့ပေး: ငါဘဝပဲဒါကြောင့်ပိုပြီးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကျွန်မကြာမြင့်စွာ Streak ပေါ်ရယ်သည့်အခါလောကဓာတ်လုံးကိုအကြှနျုပျကိုမှတက်ဖွင့်လှစ်ကြောင်းစီးဆင်းရှာပါ။ ဤတွင်အချို့အရင်းအမြစ်များကိုဒီအပေါ်နေသောခေါင်းစဉ်: အကြောင်း post ကို "မဟာ" နှင့်ပတ်သက်သော post ကို chi / စွမ်းအင်။ PS ငါသည်ငါ့စိတ်ကူးများအစဉ်အဆက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးရှိခြင်းမှငါ့ကိုထပ်မံလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါအံ့သောငှါအချိန်ကြာမြင့်စွာစိတ်ပူပန်ခြင်းသို့ပေမယ့်ဒီသီအိုရီတွေနဲ့အတော်လေးကောင်းစွာအတွက်ကိုက်ညီသောလိင်တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူနှင့်လူမျိုးကိုပုံသမားရိုးကျလိင်ထက်ပိုမိုပြည့်စုံရာကိုရှာဖွေကြောင်းခဲ့သည် ။ ဒါဟာ karezza ဟုခေါ်သည်: ဒီနေရာမှာတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ဆောင်းပါး ဒါကြောင့်အပေါ်အဖြစ်တစ်ဦး ဘယ်လို။ ငါကကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်သင်တို့ကိုမဆိုကအတှေ့အကွုံရှိပါက, ကအကြောင်းacomment ထားခဲ့ဖူးပါဘူး!
အောက်ပါ PMO ကျော်လွှားနှစ်ခုယေဘုယျ, ဖြည့်စွတ်စိတ်ကူးများဖြစ်ကြသည်။ ပထမဦးဆုံးကဦးတည်သင်ကားမောင်းသည့်သတင်းရပ်ကွက်များကဖယ်ရှားပစ်ရန်ဖြစ်၏ နှင့်ဒုတိယ (willpower ခေါ်) ကခုခံတွန်းလှန်ရန်ယခုအချိန်တွင်အတွက်ခွန်အားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
PMO ဆီသို့သင်ကားမောင်းသည့်သတင်းရပ်ကွက်များကဖယ်ရှား on:
အချိန်ကျော်, သငျသညျ PMO အလိုရှိကြသည်တွင်ရန်သင့်ဦးနှောက်ကိုအေးစက်ပါပြီ။ မကြာခဏဒီအလိုဆန္ဒ၏အခြေစိုက်စခန်းယာဉ်မောင်းဝမ်းနည်းမှု, အထီးကျန်ဆန်, အလုပ်စိုးရိမ်စိတ်, ဒါမှမဟုတ်ငြင်းပယ်ခံရကဲ့သို့ circumstantial စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစွန်းချွတ်ဖို့, အစားသင့်ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုကိုရင်ဆိုင်ရန်နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုဒါလွှမ်းမိုးသောမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်သင်ကိုယ်တိုင်နဲ့သင့်ရဲ့ရှုထောင့်ကိုပြောင်းလဲဖို့သင်ယူဖို့ porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနေတဆင့် Self-စေရန်ဆေးပိုကောင်းမဟုတ်ပါဘူး။
သင်သည်သင်၏အသက်တာ၌ဖိအားတုံ့ပြန်ထက် PMO-ဤသူတို့ကိုမှလွတ်မြောက်ရန်သင့်ဦးနှောက်ကိုပြန်လေ့ကျင့်ရမယ်ရုံ willpower မှတဆင့်ထုတ် toughing အကြောင်းကိုနှင့်ရှောင်အတူပါလာသင့်ဦးနှောက်ထဲမှာနှင့်သင့်အသက်တာ၌အပြုသဘောဆောင်အပြောင်းအလဲများမှတဆင့်အကြီးအကျယ်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့တကယ့် အပြုသဘောလိမ်: ပိုငျကလုပျ, ပိုကောင်းသင်ကမှာရယူပါ။ ဒီစွဲလမ်းကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်အတွက်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းတွေတစ်ခုမှာပဲပျော်ရွှင်ဖြစ်ခြင်းအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည် relapses ကျော်အပြစ်ရှိခံစားမှု-သင် counterproductive မျှသာသင့်ရဲ့စွဲလမ်း၏ယာဉ်မောင်းအစာကျွေးကြသည်အဘယ်ကြောင့်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Watch ဗီဒီယို။ ငါကရှင်းရှင်းလင်းလင်းအချို့အကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့အလိုလိုရှောင်ဖို့ရှိပါတယ်စဉ်ကအကြီးအကျယ်ဓာတ်ကူပစ္စည်းကြောင်းလုပ်ချင်ပါတယ်; က၏အသုံးပြုမှုကိုအောင်သင်တို့အပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော် Self-ပါရှိသောကြောင်း PMO များအတွက်ရိုးရှင်းသောဆန္ဒလည်းရှိပါတယ်။ သင့်ဦးနှောက်ရိုးရှင်းစွာကောင်းမွန်သောဤဓာတုပစ္စည်းခံစားရတယ်, သူတို့ရရန်သင့်အားတွန်းပါလိမ့်မယ်၏အရင်းအမြစ်ကြောင်းဆုံးမသွန်သင်ထားသည်။ သင့်ရဲ့ရွေးချယ်သောသူတို့ကို၎င်း, socializing ဖတ်နေ, တှေးတောဆငျခွ, လေ့ကျင့်ခန်းများကဲ့သို့ပင်သင်၏အသက်တာ '' ကြီးထွား '' အရာမြားကို, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးဝါသနာ: သင်ကအခြားသတင်းရပ်ကွက်များကပေးရဖို့ရှိသည်။ သငျသညျရိုးရှင်းစွာတိုက်တွန်း redirect နှင့်နောက်ဆုံးတွင်သင့်ရဲ့စိတ်ကိုသူတို့အမှုအရာတို့ကိုထက် PMO ဆီသို့သင်တွန်း။ ငါမဟုတ်ရင်ငါရမ္မက်အားဖြင့်လွှမ်းနေပါတယ်, ငါသည်တန်ဖိုးရှိရှိတစ်ခုခု (လေ့ကျင့်ခန်းကိုကြီးစွာသောတစ်ခုဖြစ်ပါသည်) ပေါ်တွင်တစ်နေ့လျှင်တစ်လျှောက်လုံးအဆောက်အဦးစွမ်းအင်ကိုတက်သုံးစွဲဖို့ရှိသည်ရှာပါ။ သင်တို့သည်လည်းအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော-တွေ့မြင်အပြင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင် transmutation ကြိုးစားနိုင်ပါ။
ဆောက်သောအမှုအရာ: သင်ကြောင်းပြုပါဘာမှကာလတိုအပျြောအပါးကျော်ရေရှည်ပွညျ့စုံဦးစားပေး; နှင့်သင်တို့၏သက်သာဇုန်ထဲကသင်တို့အားတွန်းကြောင်းအရာကိုမဆို (နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမအနည်းဆုံးအရာလုပ်ဖို့ကြိုးစား) ။ အထူးသ:
အေးရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်း (အဆောက်အဦ willpower ကျော်လွန်ဤဖို့အများကြီးဇီဝကမ္မအကြိုးခံစားခှငျ့ရှိပါသညျ)
တရားအားထုတ်ခြင်း (ဖတ် ရိုးရိုးအင်္ဂလိပ်သတိ)
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့တစ်နေ့တာကိုစတင်ရန်ဘာလို့လဲဆိုတော့သင့်ရဲ့အိပ်ရာအောင်သင်တို့ပြုချင်ပါတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောသည်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုပြည့်စုံတော်မူပြီးမှသော်လည်းကောင်းတစ်ဦးတဦးတည်းဖြစ်ပြီး,; အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးကဲ့သို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်း (သို့မဟုတ်အချို့သောစည်းကမ်းလိုအပ်သည်နှင့်သင့်ဘဝတိုးတက်ကောင်းမွန်အချို့နဲ့အခြားလုပ်ငန်းတာဝန်သင့်အိပ်ရာကို Making ထိုနေ့၏ကြွင်းသောအရာများအတွက်သေံသတ်မှတ်)
၎င်းကိုတိုက်စားနေသောအရာများ - နောက်ဆုံးတွင် 'သေလွန်သောသူတို့သည်အပျော်အပါး' များသို့မဟုတ်ဘဝမှအာရုံပျံ့လွင့်မှုများအတွက်သင်၏စိတ်ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း။ အထူးသဖြင့် (အလွန်အကျွံ - ဤအရာများကိုသင့်တင့်မျှတစွာဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်အနည်းဆုံးမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရက်နှင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဗဟိုပြုစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုအတွက်) ကျွန်ုပ်သည်ဤသို့မထင်ပါ -
ဂိမ်း (တစ်ဦးတည်းနှင့် / သို့မဟုတ်အလွန်အကျွံမှာအနည်းဆုံး)
အသိဉာဏ်မရှိတဲ့အင်တာနက် browsing အတွက် (ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သင်၏အချိန်ကန့်သတ်နှင့် / သို့မဟုတ်သင်တို့သို့သာစိတ်ကို-ဘို့ဥပမာအားဖြင့်တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်ရည်မှန်းချက်ရှိသည့်အခါအသုံးပြုရန်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ဆောင်းပါးကိုဖတ်ရှုခြင်းထက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတစ်ခုခု '' ရှာဖွေနေ ')
တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သို့မဟုတ် egoic အတွေးပုံစံများ
ငါတဦးတည်းပုံစံအတွက်လက်ငင်းဆန္ဒပြည့်သို့ပေးခြင်း (compulsive အလိုဆန္ဒအားဖြည့်များ၏စိတ်ကူးနှင့်ကိုက်ညီ) ပုံစံအားလုံးကိုထဲမှာအဘို့အကြှနျုပျ၏အလိုဆန္ဒတိုးပွါးကြောင်းရှာပါ။
တသမတ်တည်းအိပ်ပျော်ခြင်းအချိန်ဇယား: ငါတသမတ်တည်းအိပ်ပျော်ခြင်းအချိန်ဇယားအပေါ်တည်းခိုရှိမရှိစည်းကမ်းကိုတည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်သို့မဟုတ် သာ. ကြီးမြတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအားပေးအားမြှောက်, ဒါမှမဟုတ်အိပ်ရာအတွက်ပျင်းရိကျချိန်နာရီကိုရှောင်ရှားခြင်းဖြင့်, ငါ့ကိုဤသည်၌တစ်တွေအများကြီးကူညီပေးသည်ကြောင်းရှာပါ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ transmutation in: ဒီ post , / u / killthefap125 မိမိအ technique ကိုဖော်ပြသည်။ အများအပြားထွက်ရှိရှိပါသည်။ ငါအကောင်းတစ်ဦးအကျဉ်းချုပ်များကိုအခြားသူများကစွန့်ခွာလိမ့်မယ်။ အထက်နှင့်ဆက်စပ်ပို့စ်အတွက် technique ကိုသုံးပြီးကျွန်မအတော်လေးခက်ခဲတဲ့အဆင့်အပြီးတစ်ဦး 8 နေ့က Streak ကစေပြီ။
သင်ရေချိုးခန်းသုံးစွဲဖို့မလိုအပ်သောကွောငျ့သငျသညျရှိသည်အချိန်တစ်ဦးကအများကြီးအားတိုက်တွန်းလိုက်သည်။ အကြှနျုပျ၏မှန်းဆဖိအားကိုသင်လွှတ်ပေးရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုသင်၏ဦးနှောက်မှအချက်ပြမှုများပို့ခြင်း, သင့်ဆီးကျိတ်ပေါ်တက်ဆောဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီးဖိုင်ဘာအစာစားကြိုးစားပါ (fibrous သစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များဖွင့်ကိုကြည့်) နှင့်အိပ်ရာရှေ့တော်၌ထိုနာရီအတွင်းသောက်ရေရှောင်ကြဉ်ပါ။
မသိစိတ်တစ်ပိုင်းအကြံပြုချက်: "ငါ FAP ကြဘူး" ဟု "ငါသည် FAP ချင်ကြဘူး" ဟုထက်သင့်ရဲ့မသိစိတ်တစ်ပိုင်းအပေါ်တစ်ဦးထက်ပိုအားကောင်းတဲ့သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောစည်းကမ်းချက်များ၌ထုတ်ရေးသားခြင်းအဖြစ်ကောင်းစွာကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ဒီအပေါ်မဆိုပိုပြီးအချက်အလက်အလွန်ကြိုဆိုသည်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ် Tensing နှင့်သငျ့ကိုတိုကျတှနျးတဲ့အခါကိုယ့်ကိုကိုယ်ဤထပ်ကျော့လည်း PMO ဆီသို့မသိစိတ်တစ်ပိုင်းအရှိန်အဟုန်ကိုသတ်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
ကျန်းမာစားအလုံအလောက်ရေကိုသောက်လော့။ အမှုအရာတွေအများကြီးသို့ဤဆက်ဆံရေး: ပျြောရှငျဖြစ်ခြင်းကိုပိုမိုစည်းကမ်းဖြစ်ခြင်း, etc, လက်ငင်း-ဆန္ဒပြည့်အစားအစာများများအတွက် compulsive အလိုဆန္ဒအားဖြည့်ကျန်းမာသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ငါမှတ်ချက်၌ငါ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကြံပြုချက်များထားခဲ့ပါလိမ့်မယ်။
ငါသညျဤအထောကျအကူခဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်။ မည်သည့်အကြံပြုချက်များသို့မဟုတ်ပီပီနှင့်ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်တွေစွန့်ခွာပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
LINK - [မူကြမ်း] NoFap မှပြည့်စုံသော Beginner ၏လမ်းညွှန်
ကတ်ထူလိပ်ပြာကို လိုက်ဖမ်းသည်။ "ငါ့ရည်းစားက နေ့တိုင်း ညစ်ညမ်းကြည့်ပေမယ့် တစ်လမှာ တစ်ကြိမ်ပဲ လိင်ဆက်ဆံချင်တယ်" t.co/F74vqISmyv